पोखरा विमानस्थलमा एक्कासि धु’वाँको मु’स्लो द’न्किएपछि (हेर्नुहोस भिडियोसहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. पोखरा विमानस्थलमा एक्कासि धु’वाँको मु’स्लो द’न्किएपछि (हेर्नुहोस भिडियोसहित) – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
पोखरा विमानस्थलमा एक्कासि धु’वाँको मु’स्लो द’न्किएपछि (हेर्नुहोस भिडियोसहित)
पोखरा एयरपोर्ट नजिकको सडक भएर आवतजावत गर्नेहरु आज साँझ अचम्मित भए । एयरपोर्ट भित्रबाट स्पिकरमार्फत् ठूलो आवाज आइरहेको थियो । भित्र हेर्दा धावनमार्ग नजिकै हवाइजहाज जस्तो आकृति देखिन्थ्यो र त्यसमा दन’दनी आ’गो द’न्किरहेको थियो । धु’वाँको मु’स्लो निस्किएको थियो । एयरपोर्टभित्र ठूलै दु’र्घ’टना भएको उनीहरुले अनुमान लगाए । ठूलो आवाजमा मान्छेहरु ‘हेल्प हेल्प, बचाउ बचाउ’ भनिरहेका थिए ।
मानिसहरु आत्तिए । कसैले दमकललाई, कसैले प्रहरीलाई फोन गर्न थाले । त्यतिनै बेला साइरन बजाउँदै दमकलहरु दौडन थाले । सबैले आज एयरपोर्टमा कुनै अप्रिय घ’टना भएकोमा निश्चित भए जस्तो लाग्थ्यो । तर, एयरपोर्टमा कुनै पनि अप्रिय घ’टना भएको थिएन ।
बेलुकी चार बजेपछि पोखरा एयरपोर्टमा नमूनाको रुपमा जहाज दु’र्घटना गराइयो । त्यसपछि उक्त जहाजमा आ’ग’लागी पनि भयो । आ’गो निभाउनका लागि दमकलको सहारा लिइयो । त्यस्तै, घा’इतेको उपचारका लागि एम्बुलेन्स पनि गुडे ।
यी सबै घ’टना नमुनाको रुपमा गरिएको थियो । अभ्यासका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, रेडक्रसका पदाधिकारीहरु लगायत खटिएका थिए । यसको पूर्व तयारी अन्तर्गत सोमवार र मंगलवार सामान्य अभ्यास समेत भइसकेको थियो । दु’र्घ’टना भएको खण्डमा पूर्वतयारी स्वरुप यस्तो अभ्यास गरिएको हो ।
यस्तै, उ’द्धार अभ्याससँगै चार दिने विपद् उद्धारकर्मीको क्षमता विकास तालिमको समापन गरिएको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको March 17, 2021 March 17, 2021 336 Viewed